इस प्यारको मे क्याँ नाम दुँ ? - Tulsipur Online
इस प्यारको मे क्याँ नाम दुँ ?
Posted by News Desk | ३१ भाद्र २०७४, शनिबार १०:१७ |
उ उतिधेरै मोटी छैने तर म उसलाई सधै मोटी भनेर बोलाउछु । उ कहिले रिसाउछे त कहिले हासिदिन्छे अनि भन्छे ‘ आफू त कत्ती न सुकुटे जस्तो ! ’
उसलाई देखेकै छैन , उ कस्ती छे त्यो थाहा छैन । तर मनले दिमागमा एउटा तस्बिर बनाईसकेको छ । उ हल्का काली छे , अलिकती छुच्ची छे अनि मायालु छे । मनले दिमागमा बनाएको तस्बिरमा उ यस्तै यस्तै छे ।
दिमागमा बनेको तस्बिरलाई मैले मनमा पनि सजायको छु । उ अनलाईन बसेपछी मलाई छटपटी सुरु हुन्छ । मन आतिन्छ । म चाहन्छु उ मलाई हेल्लो भनोस । तर उ कहिले बोलाउदैने । बाध्य भएर म आफै बोलाउछु उसलाई । अनि एक छिन रिसाउछु उ सँग ‘ पापीनी ! कहिले हेल्लो भन्दीनौ है ? ’
उ कुरालाई मोडदै भन्छे ‘ आज तिम्लाई देखेको मैले ! ’
म अचम्म पर्छु अनि सोध्छु ‘ कहाँ अनि कतिबेला ? ’
उ बिहान मोर्निङ वाकका कुरा निकाल्छे । म मायाका कुरा गरेर थाक्न चाहन्छु तर उ बुझ्दिने यि सब ।
उ साच्चै मलाई देखेकै हुन्छे तर मैले उसलाई देख्दैन । उ हरेक दिन भन्छे ‘ आज तिम्लाई त्यहाँ देखे ! ’
तर म उसलाई मोर्निङ वाकमा कहिले देख्दैन ।
उसलाई हेर्नकै लागि उसको पसल वरपर घुम्छु , तर उसलाई देख्दैन । उसलाई मन पराउन थालेपछि म उसको गल्लीमा तिन पटक ओहोर दोहोर गर्छु तर अँह ! उसलाई देख्ने शौभाग्य मिल्दैन ।
उसलाई देखेर पनि चिन्दैन या देख्दैन त्यो उ आफै जानोस तर मेरा आखाले उसलाई खुब खोज्छन बजारमा तर अहिले सम्म देख्न पाएको छैन ।
उ इज्जतिली छे ! र त इज्जत सँग निक्कै डराउछे । अस्ति मैले जिस्काउदै भने ‘ आइ लभ यु ! ’
जिवनमा पहिलो पटक कसैलाई च्याट बाटै प्रपोज गरे । मन मात्र होईन , टाईप गर्ने औंला सम्म डराएका थिए त्यती बेला ।
उ ट्वाँ परि सायद , दुई मिनेट मौन बसि ! अनि रिप्लाई गर्दै भनी ‘ हैट ! बुढेसकालमा यस्ता कुरा नगर त । उमेरको ख्याल गर , लाज लाग्च मलाई । ’
उसलाई मैले जिस्काको मन पर्दैन रे । उ आफै भन्छे ‘ तिमीले जिस्काउदा मलाई नराम्रो लाग्छ , मलाई इज्जतको निक्कै डर लाग्छ , त्यसैले प्लिज ! यो शब्द अब नभन्नु । ’
उ ईज्जतीले छे त्यसैले पनि झन धेरै जिस्काउन मन लाग्छ ।
म झन मातिन्छु उ सँग गफिदा । किनकी मलाई उ ईज्जतिली लाग्छ । इज्जतिलो परिवारकीलाई जिस्काउदा मनमा डर हराउछ । उसलाई यहि कुरा बताउदा उ हास्छे अनि भन्छे ‘ मलाई चेक गरेको हो तिम्ले ? ’
साच्चै म उसलाई निक्कै राम्री मान्छु । अनुहार फेसबुकको प्रोफाईलमा देखेको छु , राम्री छे । मलाई उसको रुप भन्दा पनि उसको भद्रपन सँग प्रेम छ । उसले म्यासेजको रिप्लाई दिने शैली सँग प्रेम छ अनि उसको निस्वार्थ मित्रता सँग प्रेम छ ।
उ चेक गरेको ठान्छे तर म मनै देखि उसलाई चाहन्छु । यहि कुरा बताउदा उ एकदिन डराउदै भनी ‘ बसेको घर बिगार्दिने मन छ ? मलाई सडकमा ल्याउने मन छ ? ’
त्यसैदिन कसम खादै भनेको छु ‘ जिबनभर तिम्रो अघि पर्दैन तर तिम्लाई निस्वार्थ माया गर्न पनि छाडदिन । हाम्रो माया गोप्य अनि ईज्जतिलो हुनेछ । ’
उसले लामो हासो पठाउदै लेखी ‘ कति गफ जानेको पुरेत ले , गफ दिन त जातैले पाएका हुन्छन रे बाहुनहरुले । तिम्लाई गफमा कस्ले जित्ला र खै ! ’
उसले पुरेत भनेपछि टुप्पी ठाडो भयो , नाक लामो भयो । एक्कासी गायत्री मन्त्र जप्दै स्नान गरेको जस्तो लाग्न थाल्यो । बाहुन भन्दा चै सत्यनारायणको कथा बाचन गर्दै गरेका टुल्के बाउनको याद आयो । धन्न टपरे बाउन भनिने , खुशीले गदगद भए ।
उसको मन जित्न या उसको नजिकको साथी बन्न धेरै कोसिस गरे । तर अँह ! सफल भएन । लाखौ कोसिस गर्दा पनि उ पट्टिने छाट देखा नपरेपछी एक दिन उसको नाममा एउटा कथा लेख्न सुरु गर्दै उसलाई भने ‘ हेर तिम्रो र मेरो प्रेम सम्बन्धको कथा लेख्दैछु । ’
उसले नाक बटारेको इमो पठाउदै भनी ‘ उत्ताउलो लेखक ! लाज लाग्दैन ? ’
मैले पनि हासेकै इमो पठाउदै भने ‘ प्यार किया तो डरना क्या ? ’
मैले लेख्दै गरेको कथा बाट पनि उ खुशी छैने । उ मेरा हरेक कृयाकलाप बाट आजित छे सायद । उ मलाई सम्झाउन कोसिस गर्छे , म झन उत्ताउलो बनेर प्रस्तुत हुन्छु । उसको लागी म उत्ताउलो लेखक जस्तै बनेको छु ।
उसलाई आई लभ यु भन्नू सामान्य जस्तै भएको छ मेरा लागि तर उ रिप्लाई दिदैने । म थाक्छु अनि उ सुरु गर्छे अर्कै टपिकमा गफिन । उ कहिले उत्ताउली हुदैने , तर मलाई झन उत्ताउलो बनाउछे ।
उ भेटीई , तर म सँग बोलिन । नदेखे झै गर्दै उ हिडी ।
मैले उसको पिछा गर्दै धेरै चोक अनि पसल चहारे , उसलाई बोलाउने कोसिस गरे । तर अँह ! उसले म तर्फ नहेरी अलि परै पुगि अनि बिच बजारमै चिच्याउदै भने ‘ मोटी ! ओए मोटी । ’
म बेस्सरी चिच्याउदै थिए । मेरो आवाज सुनेर सँगै सुतेको बाबू उठ्यो , उता पल्लो कोठामा चिया बनाउदै गरेकी बुढी चिच्याउदै आई अनि रिसाउदै भनि ‘ सपनामा बोल्ने बानी अझै गएन है ? म दुब्लाई सके , किन अझै मोटी भन्छौ मलाई ? ’
ओ माई गड ! कल्पनामा डुबेर सपनामा समेत उसलाई देख्न थालिसकेको रहेछु ।
यसपाली धन्न बचियो । मैले बुढिलाई पहिले मोटी भन्थे तर आजभोली उसलाई मोटी भन्छु । नत्र को हो यो मोटी भनेर लफडा सुरु हुन्थ्यो ।
सपनामा समेत उसलाई पिछा गर्न थाल्ने भैसकेछु । अब त सोच्नै पर्छ ‘ इस प्यारको मे क्याँ नाम दँु ? ’
साच्चै ! के नाम दिउ म यो प्रेम लाई ? अस्तिको महिना फेसबुकमा जोडियौ । अनि सुरु भएको च्याटले मलाई निक्कै माथी पु¥याईसकेको छ तर उसले अहिले सम्म फिल गर्न सकेकी छैने ।
एकतर्फी माया पक्कै होईन होला , किन भने उ मलाई माया नगर्ने भए किन गफिन्छे घण्टौ ? किन हास्छे मजाले अनि किन भन्छे ‘ चेक गरेको मलाई ? ’ भनेर
सायद उसलाई पनि बिश्वास छैन कि म माया गर्छु भनेर । तर उ पनि मलाई माया चै गर्छे ।
हो ! संसारमा धेरै स्वार्थी प्रेमीहरु छन जो स्वार्थ पूरा गर्न जोडिन्छन अनि स्वार्थ पूरा भएकै दिन टाढिन्छ्न । तर म उसलाई कहिले स्वार्थी माया गरेन । उसलाई दिनहु सयौ बार आई लभ यु का मिठा पोका पठाउछु , अनि रिप्लाईमा उसले नाक बटारेको इमो पठाउदै भन्छे ‘ चेक गरेको है मलाई ? ’
तरपनि मैले रातो पान पाते लभको सिंग्नल पठाउन छाडेको छैन । उ भन्छे ‘ कति सस्तो शब्द हो यो आई लभ यु ? जतिबेला पनि यही भन्छौ ? ’
एकपटक होईन , दुई पटक होईन । सयौ पट्क उ चेक गरेको ठान्छे । मायाका शब्दलाई उ सस्ता ठान्छे तर तिनै मायाका शब्दले मेरो जिवनमा कति फरक पार्दछ उ सोच्दैने ।
किन बिश्वास गर्दैने त्यो उ जानोस तर मैले उसलाई प्रेम गरेको उ मान्दै मान्दैने । मात्र उ नाटक ठान्छे अनि म सोच्न थाल्छु ‘ इस प्यारको मे क्याँ नाम दुँ ? ’
Previousपश्चिम दाङमा अनेरास्ववियुको कमिटी विस्तार
Nextएमाले अध्यक्ष दाङ आउदै , अन्यदल बाट ठुलो संख्यामा एमाले प्रबेश गर्ने तयारी